दालचिनी टोस्ट केक - व्यंजनहरु
गोमांस स्टू र भाँडो भुनी बीचको भिन्नता
कसरी ग्रील्ड कुखुरा quesadillas बनाउन
खोर्सानी कुकुरहरु को लागी राम्रो मिर्च गर्न सक्छन्
दालचिनी टोस्ट केक
दालचिनी टोस्ट केक परिवारको मनपर्दो विधि हो। साधारण सामग्रीहरू तपाईंले पहिल्यै हातमा नै नरम दालचीनी स्ट्रीसेल टोपिंगको साथ नरम र फलामको केक बनाउँनुहुन्छ!
के तपाईंलाई बच्चाको रूपमा दालचिनी टोस्ट क्रन्च खाएको याद छ? म निश्चित रूपमा गर्छु - म कहिले काहिं मेरो बच्चाहरूको लागि खरीद गर्दछु! घर बनाइएको केकको सेवा गर्नेबारे त्यहाँ केहि विशेष कुरा छ, त्यसैले जब मैले समान दालचीनी टोस्ट स्वादको साथ मिठाई बनाउने अवसर फेला पारेँ, म शाब्दिक रूपमा प्रतिरोध गर्न सक्दिन!
यो नुस्खा मेरो अद्भुत मित्र मरियमको नयाँ कूकबुकबाट आयो हप्ताात्रि खाना पकाउने पुस्तक । मरियम मा ब्लग मा भान्छामा बेरेफेट र स्क्र्याचबाट सजिलो परिवार मैत्री व्यंजनहरू सिर्जना गर्दछ ( रसँग धेरै ग्लुटन निःशुल्क विकल्पहरू छन् )! उनको पुस्तकले यति धेरै अद्भुत स्वादिष्ट भोजनहरू र साइडहरू समावेश गर्दछ, सबै तपाईंले स्क्र्याच सामग्रीहरू र तपाईंलाई चिनेको र माया गर्ने सामग्रीबाट सरल समावेश गर्दछ!
त्यो मात्र हो, व्यंजनहरू फस्टाउँदैनन् र त्यहाँ छ पूर्ण अनुभाग १-2-२5 मिनेटको खाना ! मलाई मन पर्छ कि म व्यस्त फुटबल रातमा minutes० मिनेट मुनि टेबलमा डिनर लिन सक्छु!
केवल बाँकी व्यंजनहरू जस्तै यो कितिब , तपाईं सम्भवत हातमा यो नुस्खाको लागि सबै सामग्रीहरू हुनुहुन्छ! यस विधिको सादगीले तपाईंलाई रोक्न नदिनुहोस्, यो केक निश्चित रूपमा परिवारको मनपर्ने बन्न सक्छ र एकदम अचम्मको स्वाद हुनेछ!
यो नरम र क्रन्चि स्ट्रेसेल टोपिंगको साथ बुटारी हो जुन पूर्ण अपरिवर्तनीय छ।
प्यान राम्रोसँग र विशेष गरी कुनाहरूलाई ग्रीस गर्न निश्चित गर्नुहोस्। यसले तपाईंको केक सजिलै बाहिर आउँदछ र त्यो स्वादिष्ट टपिंग कुनै पनि पक्षमा अडिदैन।
ओह, यो केकको कुनामा बारेमा अर्को कुरा (मेरीले मलाई यो सानो टिप दिनुभयो) ... केकको कुनाहरू पक्कै पनि उत्तम भाग हो। तपाईं ती चीजहरू लुकाउन चाहानुहुन्छ र सबै लुकाउनको लागि तिनीहरू लुकाउन सक्नुहुन्छ (म कसैलाई भन्दिन यदि तपाईं गर्नुहुन्न भने)! कुनाहरू यस्तो देखिन्छ जहाँ सबै भन्दा स्वादिष्ट कुरकुरी दालचीनी स्ट्रीजेल भूमि!
मिठाई महान् पारिवारिक खाना अन्त गर्न केवल केहि विशेष चीज हो र म कहिले पनि यसबाट पार हुन सकेको छैन घर बनाइएको दालचीनी रोल त्यसैले मलाई थाहा थियो कि यो हाम्रो मिष्टान्न रोटेशनमा स्वागतम थप हुनेछ ... र म सहि छु! आइसक्रिमको स्कूपको साथ आफ्नो टुक्रा माथि राख्न नबिर्सनुहोस् - मेरो पतिले वास्तवमा यसलाई कचौरामा मन पराउँछ भारी भ्भारा क्रीम को एक सानो झिल्का संग शीर्ष मा भरी!
ओह, र आफ्नो प्रतिलिपि लिनुहोस् हप्ताात्रि खाना पकाउने पुस्तक यहाँ !
तपाईं खुशी हुनुहुन्छ कि तपाईंले गर्नुभयो!
तयारी समय१० मिनेट कुक समय35 मिनेट कुल समयचार मिनेट सर्भिंगहरू9 लेखकहोली एनदालचिनी टोस्ट केक परिवारको मनपर्दो विधि हो। साधारण सामग्रीहरू जुन तपाईंसँग हातमा छ पहिले नै एक नरम दालचीनी स्ट्रीसेल टोपिंगको साथ एक नरम र बटरी केक बनाउँनुहोस्! प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢दुई कप सबै उद्देश्य आटा
▢१ कप चिनी
▢दुई tsp बेकिंग पाउडर
▢१ tsp कोशेर नुन
▢१ tsp भनिला एक्स्ट्र्याक्ट
▢दुई चम्मच अनसोल्टे माखन , पग्लियो र अर्ध-कूल्ड
▢½ कप अनसोल्टे माखन , पग्लियो
▢½ कप चिनी
▢१ चम्मच दालचीनी
ओभनलाई to 350० डिग्रीसम्म पुर्‍याउनुहोस्। १० इन्च वर्ग प्यान ग्रीस गर्नुहोस्।
एक ठूलो कचौरामा पिठो, चिनी, बेकिंग पाउडर र नुन सँगै फाल्नुहोस्। दुध, भनिला, र माखन मा चलाउनुहोस्। पिटरलाई तयार प्यानमा हाल्नुहोस् र २ minutes मिनेटसम्म बेक गर्नुहोस्।
केक बेकिरहेको बेला पिघलाइएको मक्खन, चिनी र दालचिनीलाई एक कचौरामा मिलाउनुहोस् र सँगै ह्वास्क गर्नुहोस्।
२ minutes मिनेट पछि ओभनबाट केक हटाउनुहोस् र किनारमा चारै तिर सुरू हुने केकमा माथि राख्नुहोस्।
दालचीनी लेबल बबलिंग नभएसम्म थप १० मिनेटसम्म बेक गर्नुहोस्।
सेवा गर्नु अघि शीतल।
जब टपिंग थप्न, तपाइँ पहिले शीर्ष को शीर्ष मा चारै तिर र त्यसपछि हल्का शीर्ष माथि पार गर्न चाहानुहुन्छ। यो सबै केकको मध्यभागमा तुरुन्त भइरहँदा, यसले केक थोरै खस्नेछ। केक अझै स्वादिष्ट छ, तर हेर्न को रूप मा राम्रो छैन।
क्यालोरिज:8 358,कार्बोहाइड्रेट:57g,प्रोटिन:3g,मोटो:१g,पागलिएको बोसो:।g,कोलेस्ट्रॉल:35मिलीग्राम,सोडियम:२33मिलीग्राम,पोटासियम:१1१मिलीग्राम,फाइबर:१g,चिनी:4g,भिटामिन ए:5 445IU,क्यालसियम:97मिलीग्राम,फलाम:१.मिलीग्राम
कीवर्डदालचिनी टोस्ट केक कोर्समिठाई पकाइयोअमेरिकी© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सोशल मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।
न्यानो एप्पल पाई रोटी
सजिलो केरा रोटी